ဘာသာရေးရာ | Mg Ogga's Notes
ဘုရားတရားသံဃာ အကြောင်း သိသလောက် မှတ်သလောက်
< ဒီပိုစ့်လေးကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က ရေးထားတာပါ အဲဒီတုန်းကတော့ အတော်ကြိုက် အဓိက ကိုယ်ကိုကိုယ်ဝေဖန်ရေး လုပ်ထားတယ်လို့ ပြောလို့ ရတယ်။ ရေးစရာလည်းမရှိ ပျင်းလည်းပျင်းတာမို့ အဟောင်းလေးပဲ ပြန်တင်လိုက်တယ် ဟောင်းပေ့မဲ့ ဖတ်ရသေးရင် အသစ်ပေါ့ ဗျာ 😛 > နေ.တစ်နေ.မွေးဖွားလာတယ်။သူအိပ်ယာကနေပုံမှန် အတိုင်းပဲနိုးလာတယ်။ တစ်အိမ်လုံးဘယ်သူမှ မရှိ သူတစ်ယောက်တည်း ဒီနေ့ဘာနေလဲ့ပြက္ခဒိန်ကြည်.လိုက်တော့ တစ်နှစ်တာ ဆယ်နှစ်လထဲ က တစ်ခုသောမြန်မာလပြည်နေ့………. ဘာလုပ်ရမလဲ သူမသိအလုပ်ကလည်းပိတ်တယ်။သူချစ်နေ့ရတဲ့သူကလည်း နယ်ကိုပြန်သွားတယ်။ အိမ်က သူငယ်ချင်းတွေကလည်းသူကိစ္စနဲ့သူသွားကြတယ်။အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိ ပျင်းပျင်းရိရိရှိ လှ၏။ ဘာလုပ်လို.ဘာကိုင်ရမလဲမသိ နောက်ဗိုက်ဆာလာလို. အိမ်အောက်က ထမင်းဆိုင်မှာ ထမင်းကြော် နဲ့ ကိစ္စပြီး အောင် စားလိုက်တယ် စားမကောင်းဘူး။ အိမ်ရှေ့မှာဘစ်(စ်)ကားတွေ…